पाठेघरको अपरेशन गर्ने ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि जानकी हेल्थकेयरबाट शुरु
मंसिर ७, २०७८, ६:४७ PM
जनकपुरधाम । बिना चिरफारको पाठेघर अपरेशन गर्ने ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि जनकपुरधाममै पहिलो पटक जानकी हेल्थ केयर एण्ड टिचिङ्ग हस्पीटलले संचालनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश २ मा एकमात्र नेशनल मेडिकल कलेजले संचालन गर्दै आएको ल्याप्रोस्कोपी (दूरबीन) अपरेशन गर्ने प्रविधि अब जानकी हेल्थकेयरले सोमवारदेखि संचालनमा ल्याएका छन । पहिलो दिनमै एक महिलाको पाठेघरको शल्यक्रिया गरी सफल उपचार गर्न सफल भएको सो अस्पतालले दाबी गरेको छ ।
‘चिकित्सा क्षेत्रमा नेपालका लागि यो नयाँ प्रविधि हो,’ अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डा. विरेन्द्र भगतले भने, यो प्रविधिले ल्याप्रोटोमी प्रविधिभन्दा कम झन्झिटिलो, कम खर्चिलो सुरक्षित रहेको छ ।
ल्याप्रोटोमी प्रविधिले चिरफार गरेर अपरेशन गर्दा ७÷८ दिनसम्म अस्पताल र महिनौ दिनसम्म घरमा बस्ने, महिनौसम्म औषधि खाने र पेट चिरेर शरीरमा क्षति पुरयाउने जस्ता समस्या हुन्छ । तर यो ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिले ती समस्याहरु बिरामीलाई झेल्नु पर्दैन । यसप्रविधिमा पेटमा मात्र ३÷४ ठाउँमा प्वाल पारेर दूरबीनयुक्त क्यामेरा र मोनिटर सहितको मेसिनले गरेको कारण बिरामी दुई भित्र डिस्चार्ज हुनेछ बढी औषधि पनि खानु पर्दैन ।
बिरामीको नाइटो नजिकै र तल्लो पेटको दायाँबायाँ प्वाल बनाइन्छ । नाइटो नजिकै पारिएको प्वालबाट दूरबिन, बत्ती र पेट फुलाउने ग्याँस (कार्बनडाइअक्साइड) भित्र पठाइन्छ । अन्य दुई प्वालबाट स–साना कैंची, चिम्टालगायत सामान पेटभित्र छिराई भीडीओ मोनिटरमा हेरेर योनीबाट पाठेघर निकालिन्छ ।
पछिल्लो केही समयदेखि नेपालमा प्रभावकारी बन्दै गएको ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि शल्यक्रिया विश्वस्तरमै पाठेघर लगायतका पेट तथा योनी भित्रका क्यान्सर, मासु बढेको लगायतका रोगका लागि कम खर्चिलो, सहज र विश्वसनीय मानिएको दाबी समेत डा. भगतले गरे ।
के हो ल्याप्रोस्कोपी ?
ल्याप्रोस्कोपी भनेको रोगको प्रविधि पत्ता लगाउने र पत्ता लगाएसँगै त्यसको समाधान पनि गर्ने प्रविधि हो । यसमा नाइटो मुनि सानो प्वाल पारेर पेट भित्र दुर्बिन छिराएर त्यहा भएकोे समस्याको हर्नु हो । यस प्रविधिबाट पेटभित्र रहेको समस्या पत्ता लगाएसँगै शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ ।
कस्तो अवस्थामा गर्ने ?
महिलाको पेटको समस्याहरु जस्तै तल्लो पेट दुखिरहने, दुखाई कम गर्ने औषधि सेवान गर्दा ठिक हुने र पछि फेरी दुखाई सुरु हुने, क्रोनिक पेल्भीक पेन भएका बिरामीलाई डायग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी गरेर जाँच गरिन्छ । महिलाहरुको यस्तो समस्यामा भिडियो एक्स–रे गर्दा कुनै समस्या नदेखिने, रगत, पिसाव जाँच गर्दा पनि पत्ता नलाग्ने, रिर्पोट सामान्य आउने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा डाइग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी गरिएमा रोगको पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
सानो दुर्बिन पठाएर पाठेघरमा मासु पलाएको, पाठेघरको बनावट, पाठेघर फुलेको, अण्डाकोषमा मासु पलाएको ,पानी वा रगत जमेको ल्यापारोष्कोपिक प्रविधिबाट निकाल्न सकिन्छ ।
इन्डोमेट्रियोसीस् (भ्लमयmभतचष्यकष्क) रोगका कारण पेट दुखाईमा औषधि सेवन गर्दा समेत निको हुदैन । लामो समय सम्म दुख्ने, यौन सम्पर्क गर्दा दुख्ने, दिशा गर्दा दुख्ने, महिनावारीमा हुने समस्यामा फाइदा हुन्छ । यस्तो समस्या अल्ट्रासाउण्डमा देखिदैन जसका लागि ल्याप्रोस्कोपी नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।
बाझोपनाका समस्या पनि यो लाभदायक मानिन्छ । किनभने यसबाट पाठेघरको बनावट, ओभरी सामन्य छ छैन देखिनुको साथै पाठेघर सानो भएको अवस्था थाहा पाउँन सकिन्छ । यसबाट क्रोमोट्युवेसन पनि गर्न सकन्छि । पाठेघरका मिथालिन व्लु भन्ने औषधि पठाइन्छ । जसको माध्यमबाट ट्युवहरु खुला छ÷छैन जाँच गर्न सकिन्छ । यसको साहेताले कतै अवरोध भएका पनि ट्युव खुल्न जान्छ ।